トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Manadihady ny Fandresena mora mba hanahafana ny toe-javatra avy mametraka ny pachinko trano izy-kery
In pachinko parlors, mampiseho vokatra Toy izany koa orinasa hafa, izany hoe, misy soso-kevitra modely. Ahoana no dia fahazoan-dalana hidirana ny modely Tsy mitovy amin'ny tsirairay ny pachinko efi-trano, izay solosaina inona no modely, dia hijery ny fomba hitrandraka raha mba misy soso-kevitra modely ny toeram-pivarotana.
Ahoana no mamantatra ny tsara indrindra ny soso-kevitra modely tena tsotra. Izany no, dia toa izany no fomba nataonao iombonana Na izany na tsy pachinko parlors. Voalohany indrindra, hiala eo anoloan'ny fidirana amin'ny pachinko efi-trano, hojerentsika modely izay efa napetraka any amin'ny toerana izay ahafahan'izy ireo ho mora hita indrindra. Raha ny modely hafa noho ny isan'ny Xintai ny modely dia lehibe, dia takelaka modely tsy misy ny modely ratsy.
Ankoatra izany, lehibe Xintai fanoloana, sns, ny raharaha ny fampidirana maro be ny isa io, dia azonao atao ny mametraka milina vaovao ao amin'io toerana io. Front seranana, no toerana ny mpanjifa ho avy hitsidika ao amin'ny tena. Noho izany tanjona, ny modely izay efa nametraka ny tena hery ao amin'ny pachinko ankehitriny efi-trano, dia napetraka tao amin'ny toerana miharihary indrindra efa tonga zavatra tsy mahaliana.
amin'ny orinasa hafa, nanolotra vokatra ho amin'ny fampisehoana nentin'ny olona teo amin'ny fidirana, dia ho izay manao ny toe-javatra toy ny rehetra ihany. Koa akaikin'ny fidirana amin'ny afisy sy ny POP aoka isika hijery. Ny akaiky indrindra an'i
modely aloha fanokafana, POP, sns mba hitarika Tokony hisy efa tsy an-kanavaka. Efa tafapetraka ao amin'ny toerana miharihary indrindra ny takelaka maodely sy ny modely farany, mety ho hevitra tsara ny hahatsiaro satria ny namana. Ao amin'ny modely, izay mifantoka amin'ny tsy-takelaka modely sy Xintai dia, niteny ny na dia apetraka amin'ny toerana rehetra, na ianao avy napetraka-akaikin'ny varavarana indray, matetika isika dia napetraka any amin'ny faran'ny ny mazava ho azy.
Raha niresaka momba ny antony, akaikin'ny varavarana indray dia manana fidirana sy ny fivoahana ny mpanjifa, dia ny hahatonga ny olona izay tonga teo amin'ny fidirana amin'ny varavarana indray ny quasi-kevitra modely. Ny vahiny nitsidika hiala eo anoloan'ny nahatonga fanokafana ny sonia modely sy Xintai, mpanjifa izay tonga mba hiditra ny toeram-pivarotana avy amin'ny varavarana indray, ny fikorianan'ny izay mitarika ny quasi-kevitra maodely dia ny ankapobeny.
Na dia izany aza, misy raharaha fa ny miavaka quasi-kevitra modely, alao indray ny mazava ho azy. Ary ny tanjona dia, amin'ny fidirana Ary tsy izany ihany akaiky, aho, toy izany mba mampiditra mitovy asa tao amin'ny fivarotana iray manontolo. Raha marika amin'ny mihazakazaka amin'ny modely iray tao aoriana, dia niakatra ny asa-mahagaga sy ny modely hafa. Fa nametraka ny fampiasana ny induction vokany.
Ankoatra izany, na dia efa nanorina ny quasi-kevitra modely ao aoriana, mba ho azo antoka ny varavarana any aoriana sy ny varavarana anoloana, tokony hisy ny POP. Indray mandeha ao amin'ny fivarotana, dia hahita soa fivarotana ny zava-misy sy manome ny zatra mijery foana ny POP sy ny peta-drindrina. Amin'izany fomba izany, ny toerana misy ny ohatra, eo amin'ny lafiny nandrefesany ny lazany sy hanosika ny ambaratonga ao amin 'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko no singa lehibe.
ny modely hametraka ny fivarotana dia hery ivelan'ny Xintai, satria misy fotoana ny fantsika efa lasa mamy, azafady jereo rehetra dia midika hoe maso. Avy tazana kely ny rehetra, tamin'izy niditra tao an fivarotana, nefa inona no soso-kevitra ianao androany, ny fivarotana, toy izany hatrany fa na nanisy hery hita avy hatrany.